(L) ဆယ်ကျော်သက်များသည်ဘာကြောင့်အရူးအမူးပြုကြတာလဲ၊ ရစ်ချတ်အေဖရစ်ဒ်မန်း (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
(L) ရစ်ချတ်အေဖရီဒမန်း (၂၀၁၅) ။
ဇွန် 28, 2014
မြီးကောင်ပေါက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စိတ်ခံစားမှုဒရာမာနဲ့ရို့ကားအပြုအမူပုံစံအားလုံးကိုနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအတွက်လက်တွေ့ကျကျပြောရလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်မကြာသေးမီကတိုင်အောင်, ဆယ်ကျော်သက် angst များအတွက်ကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောရှင်းပြချက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။ Developmental, ဆယ်ကျော်သက်, သူတို့ရဲ့မိဘများထံမှခွဲခြားရန်စတင်နေတဲ့သက်တူရွယ်တူအုပ်စုတစ်စုသို့လက်ခံခဲ့သည်တဲ့သူတို့တကယ်နေသောအထဲကရှာဖွေကဲ့သို့လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများများစွာရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ အဲဒီစိုးရိမ်စိတ်စားစရာအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန် psychoanalyst ယူမထားဘူး။
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌ဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းတစ်ဦးမြင့်တက်: သို့သော်ယခုတိုငျအောငျ, ညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်, ထို adolescence ဖို့မှောင်ဘက်ခြမ်းရှိပါတယ်။ အဓိကအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ quirk ၏, ဆယ်ကျော်သက်, ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနှင့်ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများဖြစ်စေထက်မကြောက်ဖို့မဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့ခက်အချိန်ရှိသည်။
ဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများနှင့်ဆားကစ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနှုန်းထားများမှာရင့်ကျက်။ အဆိုပါ amygdala - - ပတျသကျ. သည်နှင့်လမ်းလာမည့် prefrontal cortex, ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုများ၏ထိုင်ခုံများဖွံ့ဖြိုးဒါဟာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် processing များအတွက်ဦးနှောက် circuit ကိုထွက်လှည့်။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုတိုးမြှင့်စွမ်းရည်နှင့်အတူကြိုးကြောင်းတစ်ဦးနှောက်ရှိသည်ဆိုလိုတယ်, ဒါပေမယ့်ဆင်ခြင်ခြင်းတည်ငြိမ်အောင်မှကြွလာသောအခါအတော်လေးဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မြီးကောင်ပေါက်စိုးရိမ်စိတ်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတိုးမြှင့်စွမ်းရည်ရှိပါက, သူတို့ကထိုကဲ့သို့အသစ်အဆန်းရှာဖွေနေသူများနှင့်စွန့်စားမှု takers ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်, သင်တွေးမိပေမည်။ ဒါဟာနှစ်ခုစရိုက်များလေးသာမှုမှာဖြစ်ကြောင်းထင်ရပေသည်။ အဖြေ, စိတျအပိုငျး၌, prefrontal cortex ထက်အစောပိုင်းရင့်ကျက်ရုံက၎င်း၏ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဆားကစ်များကဲ့သို့ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကဆုလာဘ်စင်တာဆယ်ကျော်သက် '' အန္တရာယ်များအပြုအမူများစွာမောင်းနှင်။ ဒီအမူအကျင့်ဝိရောဓိလည်းမြီးကောင်ပေါက်ဒဏ်ရာနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာမှအထူးသဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြကူညီပေးသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ထိပ်သုံးလူသတ်သမားများမတော်တဆမှု, လူသတ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေကြသည်။
ဦးနှောက်-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသုံးနေပြီကျနော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဆက်ဆံစဉ်းစားပုံကိုများအတွက်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာစိုးရိမ်ပူပန်မြီးကောင်ပေါက်ထက်ထက်သန်သန်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောသောသိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံးကဲ့သို့မကြောက်ဘဲနေသူတို့ကိုသင်ပေးဖို့ကြိုးစားနေကြောင်း psychotherapy ရန်အလွန်တုံ့ပြန်မှုမကျမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ပြီးတော့တချို့ - - အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ကြိမ်ထင်စေသင့်ပါတယ်လူငယ်များအတွက်စိတ်ကြွဆေး၏အစဉ်အဆက်မြင့်တက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုပိုမိုဆိုးဝါးလာစေနှင့်ကခက်ခဲဆယ်ကျော်သက်သူတို့ကြီးထွားလုပ်ဖို့ထင်နေကြတယ်ဘာလုပ်ဘို့လုပ်တတ်မည်အကြောင်းကြောင့်ရန်သင်ယူ ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်လျော်သောအခါမကြောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ဦးစိတ်ရောဂါအဖြစ်ငါအမျိုးမျိုးသောစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်နှင့်အတူအားလုံးနီးပါးကသူတို့ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပြဿနာရဲ့ဇာစ်မြစ်ကိုခြေရာကောက်ဘယ်သူကိုအများအပြားလူကြီးများကုသပါတယ်။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ရိုင်းစိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေဖြင့်ကြားဖြတ်အနေနဲ့ uneventful ကလေးဘဝသတင်းပို့ပါ။ အများသောသူတို့က, စိုးရိမ်ပူပန်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ခဲ့ဘယ်နေရာမှာ၏ထွက်လာ၏။
၏သင်တန်းအများစုမှာဆယ်ကျော်သက်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ဖွံ့ဖြိုး, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ prefrontal cortex အသက်အရွယ် 25 န်းကျင်မှာလူငယ်လူကြီးအတွက်ရင့်ကျက်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် modulate ဖို့ကျွမ်းကျင်မှုဆည်းပူးကြဘူး။ သို့သော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆယ်ကျော်သက်များ၏ 20 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိဖြစ်နိုင်မျိုးရိုးဗီဇအချက်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုတစ်ဦးရောနှောရာမှရရှိလာတဲ့ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တူနေတဲ့ diagnosable စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ, ခံစားရသည်။ (ဦးနှောက်၌ဤဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ disjunction ရောင်ပြန်ဟပ်နှစ်ဦးစလုံးရာ၏) စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့ဇီဝအလှူငွေအလွန်သိသာသည်ငါ့အဖို့အကြံပြုသောအတော်လေးတည်ငြိမ်ခဲ့ကြပြီ။
ငါ၏အလူနာတစ်ဦးကတစ်ဦး 32 နှစ်အရွယ်အချင်းလူသား, ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်လူမှုရေးစုဝေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန် feeling ပြန်ပြောပြ။ "ဒါဟာ viscerally မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်နဲ့ကျွန်မပင်အခန်းထဲမှာအခြားလူများကဲ့သို့တူညီသောဘာသာစကားစကားမပွောနိုငျသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ ဒါဟာသူကလူ့ကုမ္ပဏီမကြိုက်မရှိ၏ အစား, အုပ်စုများအတွက်လူမှုရေးဥာဏ်သူသောအမှုမဟုတ်ခဲ့သိတယ်သော်လည်းအန္တရာယ်ရှိသလိုခံစားရတယ်။ အရက်: သူကသူ့အီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အစောပိုင်းအပေါ်တစ်ဦးမဟာဗျူဟာတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူသောက်သောအခါသူစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ခံစားရတယ်။ အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကုသနှင့်သမ္မာသတိရှိကြလော့, သူနေဆဲလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့သဲလွန်စရှိပြီးနေဆဲလူမှုရေး၏မျှော်လင့်နေတဲ့သောက်စရာဘို့ဆန္ဒရှိသော်လည်း။
၏သင်တန်း, ငါတို့ရှိသမျှသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားရသည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုအနက်ကခြိမ်းခြောက်အခြေအနေများပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုပါပဲ။ တစ်ခုစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏အမာခံများပြင်းထန်သောဒုက္ခဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်မဆိုခြိမ်းခြောက်မှုကုန်သည်ထားပြီးရှည်လျားပြီးနောက်, ပင်အန္တရာယ်ကင်း setting တွင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့နှောင့်ယှက်စိုးရိမ်စိတ်၏ဇွဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကမြီးကောင်ပေါက်ကြီးထွားကွောကျရှံ့သောတုံ့ပြန်မှုများကိုပြသခြင်းနှင့်အခက်အခဲမကြောက်ဖို့မပုံကိုလေ့လာရှိသည်သင်ယူပါတယ်။ တွင် တဦးတည်းလေ့လာမှု ဦးနှောက် MRI သုံးပြီး Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်နှင့်စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများမြီးကောင်ပေါက်၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောမျက်နှာများပြသခဲ့ကြသည်အခါသူတို့သည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု amygdala အတွက်ပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်မှုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ amygdala အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့တုံ့ပြန်အတွက်အရေးပါသော cortex အောက်နက်ရှိုင်းသောသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံတစ်ဦးဒေသဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပို့ပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ prefrontal cortex ကျနော်တို့ကယ့်ကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ရရှိခဲ့တယ်မီကပင်အန္တရာယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနခွေငျးမှဆက်သွယ်မှုများကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ သငျသညျတောအုပ်ထဲမှာတိုးမြှင်အပေါ်တစ်ဦးသည်မြွေထွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဘယ်အရာကိုမြင်သောအခါအုပ်စုခွဲ-ဒုတိယ adrenaline မြင့်တက်၏စဉ်းစားပါ။ ဒါကချက်ချင်းကွောကျရှံ့သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှု၌သင်တို့၏ amygdala ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်ပြန်ပတ်နောက်ထပ်ကြည့် ယူ. ဤအချိန်သင့်ရဲ့ prefrontal cortex ကယ့်အန္တရာယ်ချောင်းကိုခဲ့သငျသညျပြောပြသည်။
ထို့ကြောင့်ကွောကျရှံ့ခွငျး circuit ကိုတစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ amygdala ကနေကွောကျရှံ့ခွငျးနှိုးဆော်သံထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားကြစဉ်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ prefrontal cortex ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးတိကျစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းပေးခြင်း, အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ prefrontal cortex ရင့်ကျက်ဖို့နောက်ဆုံးဦးနှောက်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သောကြောင့်, မြီးကောင်ပေါက်စိတ်ခံစားမှု modulate ဖို့ဝေးလျော့နည်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ကြောက်လန့်သင်ယူမှုစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်၏စိတ်နှလုံးမှာတည်ရှိသည်။ သင်ယူမှုဒီစရိုက်ပုံစံကိုအန္တရာယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအလိုငှါဖြစ်ရပ်များနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တွေကိုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြားအသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ လမ်းပြန်ဆာဗားနားပေါ်, ဥပမာ, ငါတို့မြက်ပင်သို့မဟုတ်ငှက်တို့ရုတ်တရက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ရှဲရှဲတဲ့အသားစားအချက်ပြအံ့သောငှါလေ့လာသင်ယူကြမည်ဟု - နှင့်လုံခြုံမှုပေးရန် cue နဲ့ပြေးယူ။ ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်အချက်ပြကိုသိရှိနိုင်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိရင်ကျနော်တို့ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့နေ့လယ်စာကြပြီ။
သို့သော်ယခင်ကလုံခြုံဖြစ်လာတွေကိုသို့မဟုတ်အခြေအနေများခြိမ်းခြောက်တခါကျနော်တို့ re-အကဲဖြတ်ရန်သူတို့ကိုနိုင်ပါလိမ့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ယူကွောကျရှံ့သောအသင်းအဖွဲ့များဖိနှိပ်ဖို့ရှိသည်။ စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်နှင့်အတူပြည်သူ့ဒုက္ခဤသို့ပြုရှိသည်နှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏မရှိခြင်းအတွက်မြဲကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုတွေ့ကြုံခံစား - ပိုကောင်းစိုးရိမ်စိတ်အဖြစ်လူသိများ။
ငါမကြာသေးမီကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမြင်နောက်ထပ်လူနာတစ်ဦး 23 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကသူမသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအကြောင်းစီးပွားဖြစ်မြင်နေပြီးနောက်အသက်ငယ်စဉ်အခါသူမစိုးရိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့သည်။ "ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်များအတွက်ငါ့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်စိုးရိမ်လုပ်, ငါမကြာမီကမြင်နေပြီးထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့" ဟုသူမကဆိုသည်။ အဟောင်းဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်သူမကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူတွေကိုနီးကပ်လွန်းလာပြီသူတို့ကိုအနီးသည့်အခါသူမ၏အသက်ရှုကိုင်ထားမယ်လို့သူတို့သည် သိ. စိတ်ပူဖြစ်လာခဲ့သည် "ဒီအရူးကြီးနှင့်မျှမတို့အသိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
BJ Casey, စိတ်ပညာပါမောက္ခများနှင့် Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်မှာ Sackler Institute ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, ကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများ၏အုပ်စုတစုအတွက်သင်ယူမှုကိုကွောကျရှံ့ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသူတို့အနေနဲ့ဆန္ဒရှိဆူညံသံနှင့်ထိတွေ့ခဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအရောင်စတုရန်းပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအရောင်စတုရန်းယခင်ကတစ်ဦးကြားနေလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမနှစ်မြို့ဖွယ်သောအသံနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းနှင့်အသံများကရူးနှမ်းကြောင့်ဆင်တူနေတဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒေါက်တာကာဇီနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတွေ့အဘယ်အရာကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ဝယ်ယူအတွက်ဘာသာရပ်များအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိခဲ့ပါသည်။
ဒီ Op-Ed ၏ဗားရှင်းအသစ်၏စာမျက်နှာ SR29 ပေါ်တွင်ဇွန်လ 2014, 1 အပေါ်ပုံနှိပ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်
ဒေါက်တာ Friedman ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုကျွန်တော်အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်မှတ်ချက်များဤမျှလောက်များသောအားဖြင့်ဆောင်းပါးထက်ပိုဖတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ တစ်“ အရွယ်အစားအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်” …
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းလို့ချေါတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို - - အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပျက်တစ်ခုခုဒါပေမယ့်လာသောအခါဒေါက်တာကာဇီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သည့်အရောင်စတုရန်းနှင့်ဆူညံသံအကြားအသင်းအဖွဲ့နားမလည်ဖို့ဘာသာရပ်များလေ့ကျင့်သင်ကြား။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြိမ်ကြိမ်ဆူညံသံ၏မရှိခြင်းအတွက်အရောင်စတုရန်းပြနေကြသည်။ အခုဆိုရင်လည်းအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်လူသိများသည့်စတုရန်း, တစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့တုန့်ပြန်ထုတ်ယူနိုင်ရန်ယင်း၏စွမ်းရည်ကိုရှုံးသည်။ ဒေါက်တာကာဇီမြီးကောင်ပေါက် "နားမလည်" ဟုအဆိုပါအရောင်စတုရန်းနှင့်ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများလုပ်ခဲ့တယ်ထက်ဆူညံသံအကြား link ကိုတစ်ဦးသိပ်ခက်ခဲအချိန်တွေရှိခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ, ဆယ်ကျော်သက်ဒုက္ခယခင်ကဆန္ဒရှိတစ်ခုခုနှင့်ဆက်စပ်သော cue ယခုကြားနေနှင့်ဖွစျကွောငျးကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ "လုံခြုံစိတ်ချရသော။ " သင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူငယ်များ, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်များအတွက်ပိုမိုစွမ်းရည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးလာသောအခါတူးဖော်ရေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးထက်ပိုစဉ်းစားခဲ့လျှင် အခြေအနေများခြိမ်းခြောက်ဘို့အ tenacious မှတ်ဉာဏ်သပ္ပါယ်ဖြစ်ကြပြီးအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်အားသာချက်အပ်နှင်းလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, amygdala နှင့်လူသားမှာဖော်ပြထားတဲ့သော prefrontal cortex အကြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွာဟမှုကဒီတစ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားသာချက်ကြောင်းအကြံပြု, နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အနှံ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်စိုးရိမ်စိတ်များ neurodevelopmental အခြေခံအကြောင်းကိုယခုအသစ်နားလည်မှုကျွန်တော်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ဆကျဆံသငျ့ပုံလည်းအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်များအတွက်အများဆုံးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမျက်မြင်လက်တွေ့ထောက်ခံကုသတစ်ခုမှာသိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံး, ကြောက်မက်ဖွယ်အဖြစ်ကြုံတွေ့သောလှုံ့ဆော်မှုထပ်တလဲလဲတစ် nonthreatening ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တင်ဆက်သောမျိုးသုဉ်းသင်ယူမှုတစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျပင့်ကူတစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့ခဲ့လျှင်သင်တဖြည်းဖြည်းမရှိသဆိုးရွားအကျိုးဆက်များခဲ့ကြသည်နှငျ့သငျဖြည်းဖြည်းသင့်ရဲ့ arachnophobia ဆုံးရှုံးမယ်လို့အဘယ်မှာရှိ setting ကိုအတွက်သူတို့ကိုထိတွေ့မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဝိရောဓိမြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်သောကြောင့်အောင်မြင်စွာကွောကျရှံ့သောအသင်းအဖွဲ့များငြိမ်းအေးဖို့သူတို့ရဲ့ချို့ယွင်းစွမ်းရည်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, သေးသူတို့တိကျစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချွတ်ယွင်း၏သိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံးနဲ့တူ desensitization ကုသရန်အတွက်အနည်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
လူငယ်များယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏အပြုအမူများဟာတိုက်ရိုက်ရလဒ်အဖြစ်စိတ်ဒဏ်ရာမှထိတွေ့မှုပိုမိုကျရောက်နေတဲ့နေသောအန္တရာယ် takers များမှာကတည်းကဤသည်အီရတ်နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်သို့မဟုတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အတွက်စစ်ပွဲများ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ထိတွေ့ခဲ့ကြသောသူတို့၏အမျိုးအဘယ်အရာကိုမျှမပြော, ကြီးမားတဲ့လက်တွေ့စိန်ခေါ်မှုတင်ဆက် Newtown နှင့် Aurora ရှိသူတို့နှင့်တူပစ်ခတ်မှု။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကွောကျရှံ့သောသင်ယူမှုတစ်ပုံစံဖြစ်သော Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သွားပါလိမ့်မယ်။ ယခုငါတို့တစ်ဦးတည်းထိတွေ့မှုကုထုံးသူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးကုသမှုမကျမည်အကြောင်းစဉ်းစားရန်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ တစ်ဦးက မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု ဘာသာရပ်များရာခိုင်နှုန်း 55 သာ 60 သိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံးသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းလက္ခဏာဖြစ်စေတုံ့ပြန်ပေမယ် 81 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ဤကုသမှုပေါင်းစပ်ဖို့တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိခဲ့စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်နှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ နှင့်အခြားလေ့လာမှုအတွက်မြီးကောင်ပေါက်ကလေးတွေသို့မဟုတ်လူကြီးများထက်သိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံးနည်းကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်ကြောင်းပဏာမသက်သေအထောက်အထားရှိ၏။
Ritalin နှင့် Adderall တူသော psychostimulants သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ဥက္ကာမြင့်တက်: နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ရန်အခြားအရာတစ်ခုခုအလားအလာရှိနေပါသည်။ သီအိုရီများတွင်စိတ်ကြွဆေးစိုးရိမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုဒေတာကုမ္ပဏီ IMS ကနျြးမာရေးအရ, စိတ်ကြွဆေးအဘို့အညွှန်းရောင်းအား 2002 နှင့် 2012 အကြားငါးဆအထိထက်ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကကောင်းစွာလူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကနေလူသိများသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအလားအလာစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်သင်ယူမှုနှင့်, အထူးသဖြင့်, အေးစက်ကိုကွောကျရှံ့မြှင့်တင်ရန် stimulants သော။ adrenaline ၏ရင်းနှီးသောဆွေမျိုး - - စိတ်ကြွဆေးရုံစိတ်ခံစားမှုတရားစွဲဆိုအတွေ့အကြုံများကဲ့သို့ norepinephrine များလွှတ်ပေးရန်စေဦးနှောက်နှင့်မှတ်ဥာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးလွယ်ကူချောမွေ့။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သော့ကိုထားရှိရာကျွန်တော်အလွယ်တကူမေ့လျော့နိုင်အကြောင်းပြချက်ပေမယ်စော်ကားခံရခြင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခုခု - - သူတို့ကိုပိုပြီးကြောက်လူကြီးများစေစိတ်ကြွဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရာအသုံးပြုမှုကိုလေ့လာသင်ယူကွောကျရှံ့သောနှိမ်နင်းရန်မြီးကောင်ပေါက်များ၏စွမ်းရည်ကိုအယှက်စျနိုငျသလဲ နှင့်စိတ်ကြွဆေးအမှတ်တမဲ့စိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက် PTSD ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်နိုင်မည်နည်း အမှန်တရားအတွက်, ကျွန်တော်တစ်ဦးသဲလွန်စမရရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီသိလား: ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပဲအပူအပင်ကင်းပြီးအသစ်အဆန်းရှာဖွေနေသူများနှင့်စွန့်စားမှု takers မဟုတ်; သူတို့စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ထူးခြားသည့်အားနည်းချက်ဖြစ်ကြပြီးအန္တရာယ်များဖြတ်သန်းမကြောက်ဘဲနေလေ့လာသင်ယူခဲအချိန်ရှိသည်။ မိဘများဆယ်ကျော်သက်စိုးရိမ်စိတ်မျှော်လင့်ထားခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှိသည်, သူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်နှစ်သိမ့် - နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကို - သူတို့သည်မကြာမလုံလောကျအထိကြီးထွားကထဲကလိမ့်မည်ဟုသူတို့အားသတိပေးသည်။